एमालेमा ओलीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवका उम्मेद्वार को?
काठमाडौँ – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार महाधिवेशनबारे जानकारी दिँदै मिडियासँग भने, ‘मैंले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव सर्वसम्मत भएको वा धेरै मत ल्याएर निर्वाचित भएको हुन्छ।’ सँगै ओलीले आफूले सर्वसहमतिका लागि कोसिस समेत नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। उनले भने, ‘म करकाप गरेर सहमति कायम गर्ने पक्षमा छैन। अब पक्षको व्यवस्थापनमा अल्झिने होइन। […]
एमाले महासचिवमा विष्णु कि शंकर?
काठमाडौं, मंसिर ८ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को १०औं महाधिवेशन दुई दिन मात्र बाँकी छ । यतिबेला पार्टीको प्रभावशाली पद हत्याउन नेताहरू आन्तरिक रणनीतिमा जुटेका छन् । महाधिवेशन नजिकिएसँगै पार्टीको प्रभावशाली पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदका लागि नेताहरू रणनीतिमा जुटेका छन् । १०औं महाधिवेशनमा महासचिवका पाँच जना दाबेदार देखिएका छन् । वर्तमान उपाध्यक्ष भीम […]
एमाले महासचिवमा पौडेल कि पोखरेल ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को १०औं महाधिवेशन दुई दिन मात्र बाँकी छ । यतिबेला पार्टीको प्रभावशाली पद हत्याउन नेताहरू आन्तरिक रणनीतिमा जुटेका छन् । महाधिवेशन नजिकिएसँगै पार्टीको प्रभावशाली पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदका लागि नेताहरू रणनीतिमा जुटेका छन् । १०औं महाधिवेशनमा महासचिवका पाँच जना दाबेदार देखिएका छन् । वर्तमान उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष बन्नेमा दुई मत छैन । तर, रावलको उम्मेदवारीले ओलीलाई सर्वसम्मत हुनबाट भने धक्का लागेको छ । उता, अध्यक्षपछिक...
मैले मन पराएको उपाध्यक्ष र महासचिव निर्विरोध वा सर्वाधिक मत ल्याएर निर्वाचित हुन्छ : ओली